घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू Ollie Watkins बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
ओली वाटकिन्सको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरलतामा हामी तपाईलाई ओली वाटकिन्सको पूर्ण जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं - उनको शुरुआती दिनदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। त्यो भन्दा पहिले, उनको जीवनी को एक संक्षिप्त चित्र सारांश हेर्नुहोस्।
ओली वाटकिन्स बायो। उहाँको दुर्लभ जीवन र उदय हेर्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ? ... अक्टूबर २०२० सम्म, ओली वाटकिन्सले दश वर्षमा प्रिमियर लिगमा लिभरपूल बिरूद्ध ह्याट्रिक गर्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा आफैलाई स्थापित गरे। यद्यपि केवल थोरै मानिसहरूले मात्र उनको बायोको बारेमा जान्दछन् - किनभने सम्भवतः तपाईंले हैट्रिकको अघि उसको नाम सुन्नुहुन्न। अब ढिलाइ नगरौं, उनको युवावस्थाको कथाबाट सुरु गरौं।
ओली वाटकिन्स बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उनका पूरा नामहरू हुन् ओलिभर जर्ज आर्थर वाटकिन्स। ओलीको जन्म December० औं दिन डिसेम्बर १ 30 1995 his मा टर्क्वे, इ England्ग्ल्याण्डमा उसका आमा-बुबामा भएको थियो। जवान छोरा आफ्नो बुबा र आमाको बिचमा धन्यको मिलनबाट जन्मेका केहि बच्चाहरू मध्ये एक हो।
यद्यपि उनको जन्म टोरक्वे (डेभनको समुद्रीतट शहर) मा भएको थियो। वाटकिन्सले आफ्नो बाल्यावस्थाका धेरैजसो दिन न्यूटन एबोटमा बिताए। सानो छँदा उसले फुटबलमा गहिरो चासो जगायो र चाँडै अंग्रेजी फुटबलको पाँचौं तहको सानो क्लब टोरक्वे युनाइटेडको पूर्ण समर्थक भए।
Ollie Watkins परिवार पृष्ठभूमि:
वाटकिन्सको नम्र सुरुवात धेरै अन्य अ English्ग्रेजी खेलाडीहरू भन्दा फरक छैन। संक्षेपमा, उहाँ मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाटका हुनुहुन्छ। अरु के छ त? ओली वाटकिन्सका अभिभावकहरू जब उनीहरूले आफ्नो छोराको पूर्ण-समय क्यारियरको रूपमा फूटबलमा डुब्ने आकांक्षा बुझे तब डराएनन्।
जे होस् उहाँकी आमा र बुबालाई फुटबल खेलाडी हुर्काउन आवश्यक प्रतिबद्धताको थाँहा थियो, तैपनि उनीहरूले वाटकिन्सको सपनालाई समर्थन गरे। जवान केटाको लागि, आरामदायी घरबाट आएका सपनाहरूको अनुसरण गर्न समर्थन प्राप्त गर्न अनुवाद गर्दछ। खेललाई पन्छाएर उसको बुबा र बुबा दुवै शिक्षामा विश्वास गर्थे।
ड्यानियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Ollie Watkins परिवार मूल:
हो, तपाईंलाई थाहा छ उहाँ ब्रिटिश हुनुहुन्छ, तर हामी त्यसका जरामा गहिरो जान्छौं। यस्तो संभावना छ कि ओली वाटकिन्सको परिवारको जरा डेभन काउन्टीबाट छ। त्यसकारण उसको परिवारले न्युटन एबोटमा लामो समय बिताए।
ओल्ली वाटकिन्स क्यारियर कहानी (उनका शुरुका दिनहरूबाट):
यद्यपि जवान वाटकिन्स फूटबल खेल्नमा बढी इच्छुक थिए तर उनका आमाबुबाले उनी औपचारिक शिक्षा पाएको चाहन्थे। तसर्थ, तिनीहरूले उनलाई दक्षिण डार्टमूर सामुदायिक कलेजमा पढ्नको लागि भर्ना गरे। त्यहाँ छँदा, उसले फुटबल खेल्छ र पिचमा आफैंको लागि नाम कमाउन प्रयासरत छ।
पॉल Scholes बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
२०० 2003 मा त्यहि अवधिमा, अ lad्ग्रेजी केटाले एक्सीटर सिटी एकेडेमीको साथ एक U-9 परीक्षणमा भाग लिए तर परीक्षा असफल भयो। प्रेससँग कुरा गर्ने क्रममा एक्स्टरका प्रबन्धक साइमन हेवर्डले ओली वाटकिन्सको पहिलो परीक्षण असफल भएको किन खुलासा गरे। उसले भन्यो;
“मलाई वाटकिन्सलाई अन्डर9प्लेयरको रूपमा देखेको याद छ, र हामीले महसुस गर्‍यौं कि ऊ हाम्रो दर्ता गरिएको एकेडेमी खेलाडी बन्न तयार छैन।
कहिलेकाँही तपाईले अन्तरदृष्टि पाउनुहुनेछ कि केहि खेलाडीहरू उनीहरूको घाँस-जरा क्लबको बीचमा त्यस समयमा एकेडेमीमा संक्रमण गर्न सक्षम हुँदैनन्। त्यसकारण हामीलाई लाग्दैन कि ओली त्यो परिवर्तनको लागि तयार छन्। "
एकेडेमी अस्वीकृति पछि चल्दै:
आफ्नो फुटबल आकांक्षाहरू गुमाउनुको सट्टा, वाटकिन्स आफ्नो प्रारम्भिक निराशालाई चुनौती दिन अझ दृढ भए। भाग्यवस, उनले अर्को सत्रमा एक्सेटर एकेडेमीमा U-10 खेलाडीको रूपमा दर्ता गर्न स्वीकार गरे। यसैले उसको फुटबल साहसिक कार्य शुरु भयो।
हामी सबैलाई थाहा छ, यो हाम्रो जन्मजात प्रतिभा पालन पोषण गर्न स्थिरता र कडा मेहनत लिन्छ। उही शिरामा, वाटकिन्स आफ्नो प्रशिक्षणको लागि यत्तिको प्रतिबद्ध थिए कि उहाँ बिस्तारै आफ्नो एकेडेमीका मान्यता प्राप्त युवा खेलाडीहरूको समूहमा उत्रनुभयो।
कुनै टाढा समयमा, युवा प्रतिभाशाली खेलाडीले २०१२ मा छात्रवृत्ति कमाएको धेरै फुटबल शक्ति प्रदर्शन गरे। मोरेसो, अप्रिल २०१ 2012 मा एक्सीटरसँग दुई वर्षको व्यावसायिक सम्झौतामा मोहर लगाए पछि उनको प्रशिक्षण समाप्त भयो।
Ollie Watkins जीवनी - प्रख्यात कहानी को मार्ग:
उसको व्यावसायिक क्यारियरको शुरुका दिनहरू सबै गौरवशाली हुन सकिएन। दुर्भाग्यवश, वाटकिन्सले २०१ 2014 को अन्त्यमा एक महिनाको loanणमा वेस्टन-सुपर-मारेमा सामिल हुनु अघि एक्स्टरको लागि तीन पटक उपस्थित हुने अवसर पाएका थिए। क्लबमा, युवा अंग्रेजले एक प्रभावशाली प्रदर्शन गरे।
Ollie Watkins Bio - सफलता कहानी:
एक्स्टरमा फर्किएपछि, प्रशंसक खेलाडी टिमको पहिलो एघारमा आफ्नो नाम बुक गर्न असफल भए। जे होस्, उसले राम्रो अवसर प्रदर्शनको विकल्पको रूपमा प्राप्त हुने हरेक सानो अवसरको उपयोग गर्‍यो।
बिस्तारै, वाटकिन्सले महत्त्वपूर्ण असर गर्न जारी राख्यो। २०१ 2016 मा, उनले सुरुवात लाइनअपमा प्रवेश गरे। फेरि, कुनै पनि टाढा समयमा, उनले २०१F मा EFL लीग दुई प्लेयर अफ द माह पुरस्कार र EFL युवा प्लेयर अफ द ईयर पुरस्कार जित्यो। हेर्नुहोस्, उनले कसरी आफ्नो कडा कमाएको सम्मान प्रदर्शन गर्दछन्।
एक्सीटरका लागि उसको सबै appea 78 उपस्थितिमा, वाट्किन्सले २ goals गोल बनाए जुन nt बर्षे अफ्रिकाको १.26 मिलियन डलरको अफ्रिकाको लागि ब्रेंटफोर्ड जानुभयो। ब्रन्टफोर्डमा, उनले १4प्रदर्शनमा goals goals गोल गरे। पछि, वाटकिन्स सामेल भए रस बर्कले र ज्याक ग्रेलीश २०२० मा on million मिलियन डलरको पाँच बर्षे ठेक्का सम्झौताको लागि एस्टोन भिल्ला। बाँकी, उनीहरू भन्छन, इतिहास हो।
एली एल्डरसन र ओली वाटकिन्स प्रेम कहानी:
सबै ईमानदारी मा, प्रशंसक अंग्रेजी खेलाडी सजिलै एक स्वस्थ र उत्तम प्रेम जीवन लाई राख्न को गर्व गर्न सक्छन्। तपाईंलाई सत्य कुरा भन्न, वाटकिन्सको एक सुन्दर प्रेमिका छ जो एल्ली एल्डरसनको नामले परिचित छ।
चाखलाग्दो कुरा, ओली वाटकिन्सकी प्रेमिका इन्स्टाग्राम मोडेल हो जसले आफ्नो क्यारियर प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछ। सत्य कुरा के हो भने, हामी उहाँको जीवनमा उनको भूमिकालाई कहिले पनि बढावा दिन सक्दैनौं। यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि वाटकिन्स प्राय जसो उनको आधिकारिक कार्यक्रमका साथसाथै उसको निजी गतिविधिहरूको लागि बाहिर जान्छन्। Ollie Watkins 'पत्नीको यो प्यारा फोटोको साथ तपाईंको आँखा फीड गर्नुहोस्।
Ollie Watkins निजी जीवन:
हामी सबैलाई हास्यको अनौंठो भावनाको साथ जन्म भएको तथ्यमा विवाद गर्न सक्दैनौं। त्यो अवस्थामा, वाटकिन्सले विवादास्पद र विवेकशील व्यक्तित्वको धेरै प्रदर्शन गरे। त्यसकारण उनका धेरै टोलीका साथीहरूले उनलाई एक भरपर्दो, अनुशासित र केन्द्रित खेलाडी ठान्नु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन।
विपरीत Ngolo Kante, एस्टन भिल्ला केन्द्र अगाडि मैत्री छ, च्याट, र भीडबाट ऊर्जा खींच्न। त्यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि उसले साना बच्चाहरूसँग केहि समय खर्च गर्न र कुराकानी निम्तो आमन्त्रित गर्नमा रोचक महसुस गरे।
ओली वाटकिन्स जीवनशैली:
त्यहाँ कुनै ईपीएल प्लेयर छैन जसले २१ औं शताब्दीमा सभ्य पैसा कमाउँदैन। त्यस्तै, वाटकिन्सले पर्याप्त नगद बनाएको छ जुन आफैंलाई एक विलासी जीवन शैली बर्बाद गर्न सक्छ। तसर्थ, ऊ आफ्नो जीवनको कुनै पनि प्रकारको आर्थिक संकटबाट चिन्तित छैन।
यद्यपि उनले आफ्नो सम्पत्ति को बारे मा अधिक गुप्त हुन कोसिस गरेको छ, वाटकिन्स एक पटक एक महँगो मर्सिडीज बेन्ज (आफ्नो मनपर्ने कार) प्रशिक्षण मैदानमा चलाए। मोरेसो, उहाँसँग सुन्दर घर पनि छ जसमा विश्व-स्तरीय स्विमिंग पूल छ। तल वातकिन्सको सम्पत्तिको प्रदर्शनलाई हेर्नुहोस्।
पीटर कोचचे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
ओली वाटकिन्स नेट वर्थ:
एस्टन भिल्लामा उनको कदम पछि, आइकनको खेलाडीले आफ्नो वित्तीय कार्यवाही मा वृद्धि रेकर्ड। वास्तवमा, वाटकिन्सको नयाँ क्लबले उनलाई pay 3.9।। मिलियन डलरको तलब उत्पन्न गर्ने पेरोलमा राख्यो। वाह! यसले उसको आय ब्रन्टफोर्डमा उसको वार्षिक आम्दानी भन्दा six गुणा बढी बनाउँछ।
Ollie Watkins परिवार जीवन तथ्यहरु:
वाटकिन्सको जीवनी उनको परिवारको योग्य उल्लेख बिना अपूर्ण हुनेछ। तसर्थ, हामी तपाईंलाई उनको परिवारको बारेमा उनको आमासँग शुरू हुने जानकारीको साथ प्रस्तुत गर्दछौं।
ओली वाटकिन्स आमाको बारेमा:
यो भन्ने बिना नै गइन्छ कि सम्मानित गोल स्कोररले आफ्नो आमाबाट समर्थन र प्रेमको एक धेरै आनन्द उठायो। यद्यपि उनका धेरै प्रशंसकहरूलाई यो अनौंठो लाग्छ कि उनले एक साक्षात्कारमा आफ्नी आमाको नाम उल्लेख नगरेको आफ्नो राईज टु फेमबाट पाए। हामी सबैलाई आशा छ कि उसले चाँडै नै उनको आमाको परिचयको बारेमा सबैको जिज्ञासा पूरा गर्नेछ।
ओली वाटकिन्स फादरको बारेमा:
फुटबलको सम्पूर्ण विश्व प्रशंसनीय खेलाडीका बुबाले उहाँलाई यति राम्रोसँग हुर्काएकोमा एक प्रशंसाको .णी छ। यो वाट्किन्सको क्यारियर सफलता सम्झन र एक व्यक्ति बिर्सनु हो जसले उसलाई उसको महत्वाकांक्षा पछ्याउन मद्दत गर्छ भने यो गलत हुनेछ। त्यहाँ केहि बुबाहरू छन् जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई मद्दत गर्न जारी राख्दछन् जब उनीहरूको खेलकुदमा पहिलो परीक्षण असफल हुन्छ। र वाटकिनका बुवाहरू ती मध्ये एक हुन्।
Ollie Watkins भाई बहिनीहरू को बारे मा:
अनुसन्धानको क्रममा हामीले यो तथ्यमा पहुँच गर्न सक्षम भएका छौं कि वाटकिन्स आफ्ना बाबुआमाको एक्लो बच्चा मात्र होइन। सत्य भन्न सकिन्छ, वाट्किन्स भाइबहिनीहरू को संख्या आफ्नो प्रशंसकहरु को लागी एक रहस्य रहन्छ। यद्यपि उनले आफू र आफ्नो भतिजीको एक तस्विर (तल देखाइएको) साझेदारी गरेको देखेर उसका अन्य भाइबहिनी छ भनेर मान्य प्रमाण दिन्छ।
Ollie Watkins नातेदारहरूको बारेमा:
हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं तर अचम्म मान्दैन किन एस्टन भिल्ला खेलाडीले उसको परिवारको बारेमा कुरा गर्दैन। यो हुन सक्छ कि उसको हजुरबुबा र हजुरआमा पहिले नै मरिसकेका छन? वा त्यहाँ अर्को कारण छ जुन उनलाई उसको पुर्खा बारे मौन बस्न बाध्य पार्छ? जेसुकै भए पनि हामी आशा गर्दछौं कि त्यसले चाँडै हाम्रो जिज्ञासालाई शान्त पार्नेछ।
Ollie Watkins अनटोल्ड तथ्यहरु:
हाम्रो Ollie Watkins लाईफ स्टोरी बेर्नुको लागि, यहाँ केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवनीको पूर्ण ज्ञान लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १ - तलब ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
प्रति महिना £ 325,500
प्रति हप्ता £ 75,000
प्रति दिन £ 10,714
प्रति घण्टा £ 446
प्रति मिनेट £ 7.44
हामीले घडीमा टिकको रूपमा ओली वाटकिन्सको तलबको रणनीतिक विश्लेषण राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
यो के हो Ollie Watkins ले कमायो जब तपाई यो बायो हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # २ - फुटबल आइडल:
मूर्तिपूजा गर्ने धेरै युवा फुटबलरहरू जस्तो छैन सी। रोनाल्डो र लिओनेल मेस्सी, वाटकिन्सले त्यो खुलासा गरे थियरिरी हेनरी सधैं उनको रोल मोडेल भएको छ। यहाँ उनले आफ्नो फुटबल मूर्तिको बारेमा कुरा गर्दा मिडियालाई भनेको कुरा हो;
“म सँधै मेरो खेल थाइरी हेनरीको खेल शैलीमा बेस गर्ने प्रयास गर्दछु। यसैले म डिफेन्डरहरूमा ड्राइभ गर्छु र बल आउँदा केही हुने गर्छ। ”
तथ्य #3- घरपालुवा जनावर:
विगत केहि वर्षहरुमा, धेरै खेलाडीहरु एक कुकुर आफ्नो पाल्तु जनावर को रूप मा प्राप्त गर्न गहिरो चासो प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै, वाटकिन्सले पनि आफ्नो प्यारो सानो कुकुरको साथ स्न्याप गर्न मन पराए जुन तपाईंलाई सम्भवतः मनमोहक लाग्न सक्छ। हामी वास्तवमै बुझ्दैनौं किन फुटबल खेलाडीहरू उनीहरूको घरमा कुकुरहरू मन पराउँछन्, तर हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौं कि उनीहरू आफ्नो घरपालुवा जनावरबाट खुशी छन्।
तथ्य #4- Ollie Watkins धर्म:
उसको पूरा नामको आधारमा, ओल्ली वाटकिन्स एक इसाई घरमा जन्मेको थियो। जे होस्, उसले आफ्नो वर्तमान विश्वासको बारेमा निजी राख्न प्राथमिकता दिन्छ। त्यसकारण मिडियामा उनले आफ्नो धार्मिक दृष्टिकोणको बारेमा कतै चर्चा गरे।
तथ्य #5- Ollie Watkins प्रोफाइल:
एटकन भिल्लामा वाटकिन्सले प्रभाव पार्ने स्तरको साथ, उनी फिफाले दिएको भन्दा बढी सम्भावित रैंकिंगको योग्य छन्। जे भए पनि, आशा गरौं कि उसले प्रिमियर लिगमा आफ्नो फूटबल शक्ति संग आफ्नो प्रशंसक वाह वाह जारी छ।
पुरा नाम: ओलिभर जर्ज आर्थर वाटकिन्स
निक नाम: ओली वाटकिन्स
जन्म मिति: 30th डिसेम्बर 1995
जन्मस्थान: टोरक्वे, इ England्ग्ल्यान्ड
प्रेमिका: एली एल्डरसन
वार्षिक वेतन: पाउन्ड 3.9 मिलियन
पालतू जनावर: कुकुर
उचाइ: १.1.8 मी (′ ′ ११ ″)
ओली वाटकिन्सको जीवन कथाले हामीलाई देखाउँदछ कि व्यक्तिहरूले तपाइँको क्यारियर निर्णयहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास गर्छन्। जहाँसम्म, यो तपाईंको सपना समात्न र मान्छेको नकारात्मक affirmations मात गर्न साहस र लगनशीलता लिन आवश्यक छ।
याद गर्नुहोस्, सफलताले सधैं मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। तसर्थ, तपाईंको सबै प्रयासहरूमा उत्कृष्टताका लागि काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको आमाबाबु, आफन्तहरू, साथीहरू र अपरिचितहरूले तपाईंलाई कसरी मनाउँछन् हेर्नुहोस्।
हाम्रो ओली वाटकिन्स लाइफ स्टोरी र बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। केवल जान्नुहोस् कि हामी तपाईंलाई सँधै गुणस्तरीय सामग्रीहरू प्रदान गर्न यहाँ छौं। जे होस्, यदि तपाइँ हाम्रो लेख मा सही लाग्दैन कि केहि पाउन को लागी, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 12